Madaxda dalka oo hambalyo u diray ciidanka xooga dalka | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Madaxda dalka oo hambalyo u diray ciidanka xooga dalka
Madaxda dalka oo hambalyo u diray ciidanka xooga dalka
Munaasabadda lagu xusayo 58-guuradii ka soo wareegatay aas aaska Ciidamada xoogga dalka ee 12 April ayaa maanta ka dhacaya magaalada Muqdisho iyo qeybo ka mid ah dalka waxaana ka soo qeyb galay madaxda dalka ugu sareyso xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan xukumada soomaaliya.
sidoo kale Taliyeyaasha Ciidamada ayaa ka qeyb galay munaasabadaasi maalinta qiimaha badan ee 12-ka April oo sanad kasta xiligan oo kale ay u dabaal-dagaan Ciidanka Xoogga Dalka ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo xarunta gaashaan dhiga oo ku taalo magaalada muqdisho .
12-ka April sanadkii 1960 ayey ahayd markii la aas aasay ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana ka soo wareegtay 58 sano.
Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed waxaa lagu Aasaasay ciidan ka kooban 8 horrimood, waxaa lagu magcaabi jiray xiligaasi magaca Cali Boobaaye ciidankaasi ayaa tiradiisu ahayd 2000 oo Askari, waxaa laga kala qoray 6 gobol oo ka tirsan gobollada koonfureed ee Gumeystihii Talyaaniga gumeysanjiray.
Previous articleShirka hormarinta warbaahinta soomaaliya oo wali ka socda Magallada Garoowe
Next articleFAALLO:Ciidanka Xoogga Dalka oo xusaya Aas-aaskooda